Heera Mootummaa: 'Hojjetoonni fayyaa mirga hojii lagachuu hin qaban' - BBC News Afaan Oromoo
Hojjetoonni fayyaa hojii lagachuudhaan mormuun mirga akka hin qabne hayyuun seeraa himan.
Hayyuu Seeraafi Ingiliiz Yunvarsiitii Keelitti barsiisaa kan ta'an Dr. Awwal Aloo hojjetoota fayyaa dabalatee warreen tajaajila bu'uuraafi addatti barbaachisoo ta'an keessa hojjetan hojii lagachuun mormii dhageessisuu akka hin dandeenye dubbatu.
Akka Heera mootummaa Itoophiyaatti hojjetoonni akka hojii lagatan keewwata 42 jalatti kaa'amee jira kan jedhan Dr. Awol, kutaama keewwataa kana jalatti garuu namoonni bakka tajaajila uummataa akka addaatti barbaachisaa ta'an kan akka xiyyaaraa, humna ibsaa, tajaajila bishaanii, hospitaala, kilinika, faarmaasii,warri ibidda dhaamsuu keessa hojjetan lagachuudhaaf mirga hin qaban.
Waldaan Hakiimota Itoophiyaa gaaffii ogeessonni fayyaa gaafatan kan deggeramu ta'us lagannaan hojii garuu fudhatama hin qabu jechuunis ibsa har'a baaseen beeksiseera.
Waldichi gaaffii tibbana ogeessonni fayyaa gaafachaa jiraniifi rakkoolee tajaajila fayyaatiin walqabatan irratti miidiyaaleef ibsa kenneen, gaaffiin isaan kaasan faayidaa dhuunfaarra darbee foyya'insa sirna eegumsa fayyaa biyyaa kan bu'uurefatteedha jedheera.
Ibsa kanaan marii ministira muummee ogeessota fayyaa waliin taasise ilaalchisuun, marii tokko duwwaadhaan rakkoon ogummaa fayyaatiin walqabatee jiru nifurama jennee hin amannu jedheera.
Dura Taa'aan Waldaa Hakiimota Itoophiyaa Dr. Gammachiis Maammoo marii sanarraa waldichi mufannaa qaba jedhan.
"Marii Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad ogeessota fayyaa waliin taasisanirratti Itoophiyaa keessa ogeessonni fayyaa buleeyyiifi dargaggootaa ciccimoon fakkeenyummaa qaban osoo jiranuu fakkeenyummaan ogeessi tokkoyyuu heeramuu dhabuutti gaddineerra," jedhan.Komii ogeessa fakkeenya gaarii qabu heeruu dhabuu kana garuu jaalalaafi kabaja Ministira Muummee keenyaaf qabnurraa ka'uun dhiifamaan irra dabarreerra jedhan.
Kana malees gaaffiilee gurguddoo akka waldaatti qabnu marii sanarratti dhiheefachuuf carraa argachuu dhabuunis akka isaan komachiise eeran.
Kanaan alattis rakkoolee ogummaa fayyaatiin walqabataniifi waldichi furmaata akka argatuuf qabsaa'aniif biroo hedduus heeran.
Kanneen keessaas dhimmi barattoota ogummaa fayyaa dhaabbilee barnoota dhuunfaa keessatti barachaa jiranii, yeroo shaakalaa, kaffaltii costsharing, hanga kaffaltii xumuranitti dokumantiin qabamuu, ramaddii fi hanqinni bajataa yeroo hunda himamu furmaata argachuu akka qabu gaafataniiru.
Dura Taa'aa Itti-aanaan Waldaa Hakiimota Itoophiyaa Dr. Birhaanuu Nagaa gamasaanitiin waldichi akka rakkoolee ogeessota fayyaa hojiirra jiranitti gufuu tahan gaaffilee 12 Ministeera Eegumsa Fayyaafi qaama dhimmi ilaallatu hundaafuu dhiheessee gariin deebii argataniiru jedhan.
Gaaffilee ammas hin furamne keessaa, hakiimonni himata iftoomina hin qabneen bakka hojiitii qabamanii hidhamuun akka dhaabbatu, ministeerri fayyaa dhimma hunda dhuunfatee iftoominni dhabamuufi faayidaan ogeessotaa akka deebii argatu ammas gaafachaa jirra jedhan.
Gaaffiifi hiriirrii amma ogeessota fayyaatiin walqabatan gaaffilee ka'an kan deeggarru ta'us nuti harka keessaa hin qabnu jedhaniiru.
Kakaasuun karaa miidiyaa hawaasaatiin godhamee lagannaa hojiifi hiriira labsuu nuti harka keessaa hin qabnu itti gaafatamummaas hin fudhannu jedhe waldichi.
Hakiimonni dargaggoonni hedduun waldicha akka hin deeggarreefi amantaan waldicharraa qaban gadi bu'uusaas heeran.
Kanaafis hiriira kana fedhiisaaniitiin Bahaa kan jiran malee qindoominaa waldichaatiin akka hin taane himaniiru.
Waldaan Hakiimota Itoophiyaa bara 1954 kan hundaa'e yoo ta'u, miseensota kuma afurii ol kan qabudha.